सम्बन्ध बिगार्ने ३ वटा खराब बानीहरु, तपाईमा पनि हुन सक्छ - Celebrity News
धनगढीमा आफ्नै डेरामा स्टाफ नर्सले गरिन यस्तो
गोकुल बाँस्कोटाले यसरी छाडे बालकोट स्थित प्रधानमन्त्रीको घर
सम्बन्ध बिगार्ने ३ वटा खराब बानीहरु, तपाईमा पनि हुन सक्छ
९ माघ २०७६, बिहीबार १६:२३ January 23, 2020 Banner News / Highlights News / समाचार / स्वास्थ्य / जीवनशैली
– के तपाइले त्यो मित्रताको बारेमा सोध्दा के “चिन्ता नगर” वा केही निराशाजन्य जवाफ आउँछ ? – त्यो मित्रतालाई अन्त्य गर्नु भन्दा “नो” भन्ने जवाफ आउँछ ? – के तपाइबाट सम्भावित शंका निवारण गर्न सीमाहरुलाई बन्देज गर्न खोजिएको छ ? – तपाइहरुकाबीचमा केही खटपट हुँदा उक्त तेस्रो मानिससँग त्यो कुरा पुगेर विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गर्छ ?
यी सबै समस्याहरुबाट छुट्कारा पाएर कसरी जोडीहरुबीच अर्थपूर्ण र समुधर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ त ? – सर्वप्रथम यदि समस्याको चुरो कुरो पत्ता लगाउने । – एक अर्कामा सांस्कृतिक लगायत कार्यक्रमहरुबाट सामिप्यता बढाउन कोसिस गर्नुस् । – एकअर्कामा इमानदार हुनुस्
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:३९
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १५:२७
वर्षौसम्म डेट एउटासँग, विवाह अर्कोसँग
पैसा कमाउने केही टिप्सः जसले तपाईं रातारात बन्नुहुनेछ ध,नी